UMila Kunis uhamba ze Iifoto zabucala kunye neVidiyo yeVidiyo esuka kwiFowuni yakhe - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
UMila Kunis uhamba ze Iifoto zabucala kunye neVidiyo yeVidiyo esuka kwiFowuni yakhe
Jonga ezona zintle zeMila Kunis imifanekiso enganxibanga, enganxibanga, ibikini kunye nemifanekiso emihle esinayo apha, ecaleni kwezona zithandwayo zesini kunye nezesondo. Kwakhona, safumana ividiyo engamanyala kaMila Kunis evuzayo kwiselfowuni yakhe!
UMila Kunis (oneminyaka engama-34) ngumdlali weqonga waseMelika. Waziwa kakhulu ngendima yakhe kwi ‘That’ 70s Show ’,‘ Black Swan ’,‘ Abahlobo abanokuxhamla 'NoJustin Timberlake,' Ted ', kunye nomdlalo bhanyabhanya wakhe wamva nje' Omama ababi '.Uvakalise uMeg Griffin kuthotho lwe- 'Family Guy'. I-iritis engapheliyo ebangele ukungaboni okwethutyana kwiliso elinye, namehlo akhe anemibala eyahlukeneyo, omnye umdaka kwaye owesibini uluhlaza. Intombazana engaqhelekanga. Wadibana nesithandwa sakhe uAshton Kutcher kwi2012, ngoku batshatile kwaye banonyana nentombi.
UMila Kunis uvuze ividiyo ye-porn
Ndothuka, ndothuka! Apha bantu sinayo eyokwenyani ye-Mila Kunis yesondo itape evuzayo kwiselfowuni yakhe! Xa ucinezela ukudlala uza kubona omncinci kwaye eneneni utyebile uMila Kunis uyabaleka. Sicinga ukuba oku kwenzeke ngomnye umntu ongahleliwe! Ngapha koko, cofa kwiqhosha eliluhlaza okokugqibela kokujonga kuqala ukubukela ividiyo ye-Mila Kunis ye-porn kwi-intanethi simahla!
UMila Kunis imifanekiso ehamba ze
I-Sexy Mila Kunis imifanekiso enganxibanga kunye neyabucala ikwi-Intanethi, ibiwe kwifowuni kwaye yavuza kungekudala, ke ngoku ungababona bonke kuMostra Musa! UMila Kunis wakhanyisa ubuze bakhe obunqunu kunye neempundu. Sonke siyazibona ezi nuds zidala, kuba ujongeka emncinci kuzo.
Siyathemba ukuba amabele akhe ajongeka ngokufanayo emva kokuba ezele abantwana ababini, kodwa banokuphucuka kuphela!
UMila Kunis engenasiphelo kunye nemiboniso yesini
UMila Kunis ubonakala elele ebhedini, emva koko emi kwindawo yokuhlamba njengoko umntu ebeka isacholo entanyeni yakhe. Emva koko uqala ukwenza naye ngaphambi kokuba ekugqibeleni bawele ebhedini. UMila kunye nendoda yakhe bajikeleza kancinci, besinika ukujonga okuhle amabele akhe ahamba ze. Iingono zikaMila ziphazamisekile, fuck!
Kwimeko elandelayo, uMila Kunis uhleli ze kwiqonga lekhonkrithi ngaphandle ecaleni kweshawa yangaphandle. Amadolo akhe atyhalele esifubeni sakhe ukuze sibone nje ubukrelekrele bukhangela.
Kule ndawo idumileyo, umlingisi waseFrance uVincent Cassel ujija uMila Kunis kwidesika yeofisi. UNatalie Portman ubabukele kwaye uzithelekelela kwindawo kaMila! UKunis unxibe ibra emnyama kunye nokugcuma njengenkwenkwezi yokwenyani. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngubani oza kuthi ufune, ushushu kwaye uphambanise umnyama omnyama uMila Kunis okanye intombazana emhlophe emhlophe UNatalie Portman, oonqunu kunye neevidiyo ezingamanyala esinayo apha?
Esinye sezona zigcawu zibalaseleyo nezishushu kakhulu ezilapha! Ndithetha ngoNatalie Portman kunye noMila Kunis wevidiyo yama-lesbian evela kwi-movie ye-epic. UKunis noPortman bayazenzela kuqala, emva koko uMila ukhulula iipantshi zeleyisi ezipinki zikaNatalie kwaye uyehla ayokukhotha impundu yakhe! UPortman uyonwabela kwaye uyakudla emlonyeni kaMila!
Kukho iindawo ezithandwa kakhulu nguMila Kunis. Utsala ihempe yakhe entloko ukuveza ibra emnyama njengoko yena noJustin Timberlake bekhulula. Emva koko baye babelana ngesondo ebhedini, uMila ngaphezulu kwendoda okwethutyana, ngaphambi kokuba aye phantsi kwamashiti ukuze aye kuye. Wenza okufanayo nakuye.
Ishushu iMila Kunis kwimontage yemiboniso yesini kunye neTimberlake, phantse ibonise amabele akhe. Yena nomfana balala ngesondo kwiindawo ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo. Ngexesha elinye sibona ukungabinanto, kodwa ngumzimba ophindwe kabini kuMila.
UMila Kunis uphinde walala ngomqolo ebhedini kwi-skimpy bra kunye neepanty. Ubonisa ubuqhetseba, njengoko uJustin ethetha naye okwethutyana. UMila uye waphakama, ekugqibeleni wanxiba ihempe.
UMila Kunis imifanekiso yesini kunye neebikini
Jonga uninzi lweefoto ezishushu apho uMila Kunis abonise khona i-bikini kunye nenombolo engaphezulu. Eli bhinqa lelinye lezona zishushu kwimizi-mveliso yefilimu, kwaye njengoko siqhele ukubona, ubonakalisa umzimba wakhe ohamba ze ngokungakhathali kwiimfuno zeemovie. UKunis usinike umzimba ongenasiphelo, ngelixa ebambe ii-tits zakhe ngezandla. Ke kwi-bikini kunye nokufota kwe-sexy.
kelly rohrbach imifanekiso enganxibanga
kat ukuchaza imifanekiso enganxibanga
UJulia roberts wavuza iifoto